२१ गतेबाट उपत्यकामा सबै खालका सवारी साधन चल्ने! - Nepali in Australia
२१ गतेबाट उपत्यकामा सबै खालका सवारी साधन चल्ने!
July 1, 2021 autherLeaveaComment on २१ गतेबाट उपत्यकामा सबै खालका सवारी साधन चल्ने!
काठमाडौं । यातायाता व्यावसायीहरुले प्रशासनलाई सोमबारबाट सबै खालका गाडि चलाउने चेतावनी दिएका छन् । व्यावसायीहरुले बिहीबार काठमाडौंका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भेटेर प्रशासनको निर्देशन नमान्ने चेतावनी दिएका हुन् । बिहीबार तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग व्यावसायी र मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा उनीहरुले आइतबारसम्म पर्खन सक्ने त्यसपछि निर्देशन अवज्ञा गरेरै भएपनि सबै खालका गाडी चलाउने उनीहरुले बताएका हुन् । जोर बिजोर पद्धतिलाई वास्ता नगरी कोरोनाको महामारीको अवस्था हेरेर सोमबारबाट सबै सवारी संचालन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यसअघि उनीहरुले शुक्रबारबाटै लामो तथा छोटो सबै खालका सवारी संचालन गर्ने बताएका थिए । तर उनीहरु प्रशासनको निर्देशनलाई पालना गर्दै रोकिएका हुन् ।
उता प्रशासनले यसअघि नै असार ५ गतेबाट जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी संचालन गराउन अनुमति दिएको थियो । त्यसमा पनि २५ सिट क्षमता भन्दा बढीका सावारी मात्रै संचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । तथापि यातायात व्यावसायीहरु भने प्रशासनको निर्णय प्रति असन्तुष्ट रहेका थिए । तर आजको छलफलमा भने तीनै जिल्लाका सिडीओहरुले ३ दिन समय पर्खन अनुरोध गरेकोले पर्खने र सोमबारबाट सावारी संचालन गर्ने नेपाल यातायात मजदुर संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार कोरोना महामारी नबढे सोमबारदेखि लामो, मध्यम तथा छोटो दुरीका सबै गाडी चल्नेछन् । अवस्था अनुकुल भए स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सोबारबाट सबै किसिमका सवारी संचालन गरिने संघको भनाइ छ । न्युज24नेपाल बाट
भाग्यमा छ भने भग’वानले २० करोडले हान्छन्, टिनको छानो फु-टाएर घर भित्र आँफै आउँछ धन
आलुको बोक्रा फ्याल्नेले पक्कै यो पढेका छैनन्।।
निषेधाज्ञामा कडाइ : के गर्न पाइने के गर्न नपाइने ? ( सुचनासहित)
May 4, 2021 auther
फेरी १८ दिन लकडाउन,समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी तयार पुरा पढ्नुहोस
October 10, 2020 auther
Exclusive: बहाना गर्नेलाई सडकमै यस्तो स*जाय, भनेको नमानेपछि रि*साए प्रह*री | हिजो भन्दा आज झनै कडा (भिडियो हेर्नुहोस)
एमसीसी सांसदबाट किन पास गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : पूर्व राजदूत शाह
कोरोना बढेसँगै तत्काल संकटकाल घोषणा लागू
प्र हरी अ सहिको श्रीमतीले गरिन सोच्नै नसकिने घि नलाग्दो ह र्कत/आफ्नै छोरीलाई यस्तोसम्म गराइन
Breaking News : इतिहासमै पहिलो पटक यतिधेरै गिरावट सुन को मुल्यमा।